HEVITRA AMIN'NY MPISOLOVAVA HO MAIMAIM-POANA
HEVITRA AMIN’NY MPISOLOVAVA HO MAIMAIM-POANA
NY HEVITRA AMIN’NY MPISOLOVAVA HO MAIMAIM-POANA
Mba hanampiana natao maimaim-poana ny toro-hevitra
Matetika, mandoa mpisolovava ho voalohany handray ny vola, dia miaiky raha toa afaka manampy mba hamahana ara-dalàna io olana na tsy. Ary noho izany dia nilàna ny nahaterahan’i toy izany ara-dalàna ny sampan-draharaha, izay za-draharaha mpisolovava hanome torohevitra araka ny lalàna ny olona ho maimaim-poana.Manampy amin’ny toro-hevitra ny ankamaroan’ny isan-karazany ny fananana fahaiza-manao ny mpisolovava hamaha ny fianakaviana sy ny asa lalàna, Fehezan-dalàna Famaizana, ny fisotroan-dronono, sivily, ara-panjakana ny lalàna, zom-pirenena, ny fonenana vonjimaika ny fahazoan-dalana ao amin’ny firenena sy ireo olana ara-pitsarana. Mila mifandray amin’ny mpisolovava, ny tokony haha-ara-dalàna ny toro-hevitra an-tserasera mety hitranga avy hatrany. Ny mpisolovava hamaly ny fanontaniana ao amin’ny minitra vitsy, ity dia zava-dehibe ny fananana, ny torohevitra araka ny lalàna an-tserasera.
Noho free torohevitra araka ny lalàna an-tserasera ianao dia afaka mahazo torohevitra ara-dalàna sy hahatakatra ny algorithm ny asa, izay mamela ny namaha ny vokatr’izany araka ny lalàna tangle tsy misy fisoratana anarana ao amin’ny tranonkala. Izany dia sarotra ny manome lanja be loatra maimaim-poana fakan-kevitra an-tserasera. Raha ny marina, ny olona mavitrika amin’ny asa ara-dalàna ny asa izay mety ho voavaha afa-tsy mpahay lalàna momba ny fototry ny fahalalana ny lalàna sy ny hafa asan’ny apôstôly ara-pitsipika, ny antontan-taratasy izay dia miara-miasa amin’ny fampiharana isan’andro.
Misy torohevitra araka ny lalàna ary misy ny mpahay lalàna
Maro ny asa sarotra hamaha noho ny maimaim-poana torohevitra araka ny lalàna an-tserasera.Amin’ity tranga ity dia tokony hisoratra anarana in-olona nihaona tamin’ny mpisolovava iray sy hitondra ny fandraisana ny antontan-taratasy mikasika ny raharaha momba azy.
Mpisolovava ho ara-dalàna ny torohevitra izany dia zava-dehibe ho an’ny fananganana ny drafitra ho an’ny asa bebe kokoa mba hanazavana ny toe-draharaha araka ny antontan-taratasy. Ny mpisolovava-poana ara-dalàna ny fizaham-pahasalamana dia hanampy mba ho marina fitarainana any amin’ny fitsarana, ireo fitarainana manohitra ny fihetsiky ny manam-pahefana, ny biraon’ny Mpampanoa lalàna ny fanambarana an-tserasera.
Matetika ny manam-pahefana, ny mpampanoa lalàna, ny mpitsara avy amin’ny ara-dalàna mamaky teny sy manoratra ny olona iray dia natombony ny fitoriana, fitarainana, na antontan-taratasy ho an’ny masoivohon’ny governemanta. Ny olona iray izay dia ny fampiharana ny ara-dalàna manan-kery ny tahirin-kevitra eny amin’ny toeram-bahoaka, na dia miresaka amin’ny fomba hafa.
Ny torohevitra araka ny lalàna an-tserasera dia hanampy anao hanao fohy sy mazava tsara ny tahirin-kevitra ho maimaim-poana, fa tsy mandoa ny saina ho azy dia ho vita. Raha fintinina, dia tokony hanomboka amin’ny maimaim-poana ny torohevitra araka ny lalàna. Marina izany, izany dia miankina amin’ny ny fampandrosoana ny toe-draharaha ao amin’ny misy ny ara-dalàna zava-tsarotra.
Ary izany no zava-dehibe fa izy dia mamaky teny
Ny Zon'ny Mpanjifa - Ny Fiarovana Ny Mpanjifa Lalàna